Amathiphu Wokuhlolwa kwe-A / B Kuzilingo ze-Google Play
NgoMsombuluko, Okthoba 14, 2019 NgoMsombuluko, Okthoba 14, 2019 UDavid Bell
Konjiniyela bohlelo lokusebenza lwe-Android, Ukuhlolwa kwe-Google Play kunganikeza imininingwane ebalulekile futhi kusize ukukhuphula ukufakwa. Ukwenza ukuhlolwa kwe-A / B okuhlelwe kahle futhi kuhlelwe kahle kungenza umehluko phakathi komsebenzisi ofaka uhlelo lwakho lokusebenza noma oloncintisana nalo. Kodwa-ke, kunezimo eziningi lapho izivivinyo zenziwe ngokungafanele. Lawa maphutha angasebenza ngokumelene nohlelo lokusebenza futhi alimaze ukusebenza kwawo. Nayi inkomba yokusebenzisa Izilingo ze-Google Play ekuhlolweni kwe-A / B. Ukusetha Isilingo se-Google Play Ungafinyelela ifayela le-